🥇 ▷ Barnaamijyada Android si loo helo Wi-Fi kuna xirmaan Internet Internet Internet bilaash ah】 👌 ✅
Barnaamijyada Android si loo helo Wi-Fi kuna xirmaan Internet Internet Internet bilaash ah】 👌
Wi-Fi bilaash ah Waxa jira meelo badan oo adduunka ah oo bilaash ah oo ay kula xiriiraan internetka. Maalmahan caadi ayey noo ahaan laheyd in aan isticmaalno qiimaheena macluumaadka wax yar, maadaama xaqiiqda ay tahay inaan heli karno shabakadaha WiFi bilaashka ah ku dhawaad ​​meel kasta.
Dhibaatada ayaa ah in mararka qaar xitaa aanan ogeyn inay halkaas joogaan. Nasiib wanaag, waxaa jira codsiyo Android ah oo naga caawin kara helitaanka isku xirnaanta internetka oo bilaash ah. Waxaad u maleyn kartaa in maqaalkani uu ku saabsan yahay barnaamijyada lagu khaarijiyo Wi-Fi. Waxba kama jiraan runta.
Barnaamijyada Android si ay u helaan WiFi oo ay ugu xirmaan internetka bilaash
Qalabka Fududeeyaha ee loo yaqaan ‘WiFi Finder’, shebekad-wareedka wireless-ka ah
Codsigan wuxuu leeyahay muuqaal khariidad bada ah, halkaas oo aad ka arki karto dhammaan shabakadaha WiFi ee aad ka heli karto hareerahaaga.
Shabakaduhu waxay u muuqdaan laba midab, waxayna kuxirantahay inay lacag la’aan yihiin ama lacag qaateen. Intaa waxaa u dheer, adoo raacaya midkastaba shabakaddan bilaa-waayirka ah, waxaad ka heli kartaa macluumaad ku saabsan shabakaddaas sidii haddii sirta ama nooca aasaaska ay u tahay (bar, maktabad) ay lagama maarmaan tahay. Sidan, waxaad ka heli kartaa shabakadaha Wi-Fi habka ugu fudud ee suuragalka ah.
Khariidadda WiFi, khariidadda shabakadda WiFi bilaash ah
Waxa uu codsigani sameynayaa waa mid kuu soo diraa ogeysiin waqti kasta oo uu jiro shabakad Wi-Fi ku dhow oo aad si bilaash ah ugu xirnaan karto internetka. Waxay leedahay beel muhiim ah, oo xitaa bixiya xaraf-siinta shabakadaha kala duwan, marka waxaad sidoo kale ku xiriirin kartaa shabakadaha mabda ‘ahaan u furan qof walba.
Marka, tusaale ahaan, haddii aad u dhowdahay biibito leh Wi-Fi. Haddii isticmaale kale uu taas horey u ahaan jiray, waa laga yaabaa inay daabacaan qoraalkooda password in lagu xidho mobiilkaaga Android, adigoon weydiin furaha furaha. Xaqiiqdii, waxaan heli karnaa xitaa shabakado gaar loo leeyahay oo milkiilayaashoodu ay go’aansadeen inay la wadaagaan furahooda sirta ah.
Instabridge ayaa ku ogeysiineysa shabakadaha Wi-Fi ee bilaashka ah
Codsigan wuxuu u shaqeeyaa si aad u lamid ah kii hore. Markaad gudubto shabakad Wi-Fi ay bulshada siisay oo ay weheliyaan eraygaaga sirta ah, waxaad heli doontaa a ogeysiis caqli badan Tani waxay kuu sheegi doontaa labadaba jiritaanka shabakad noocan oo kale ah, iyo furaha furaha ee lama huraanka ah si aad ugu xirnaatid dhibaato la’aan.
Bulshada Instabridge waxay leedahay in kabadan 3 milyan oo isticmaale, marka waa kuu fududaan doontaa inaad ka hesho Wi-Fi bilaash ah meel kuugu dhaw.
Waxaan helnaa barnaamij kale oo hawlgal aad u lamid ah. Beeshaadu waxay ku guuleysatay inay dhiibto wax kabadan 60 milyan oo fiilooyin WiFi ah adduunka oo dhan lambarkooda sirta ah, sidaa darteed waad kuxiran kartaa adigoon dhibaatooyin badan lahayn.
Waxay sidoo kale leedahay barnaamij loogu talagalay Android Wear taas oo kuu oggolaaneysa inaad si fudud uga hesho meelaha aad ka soo gasho taleefankaaga smartwatch.
Intaas waxaa sii dheer, waxay sidoo kale leedahay khariidado khariidad khariidad ah, kaasoo kuu oggolaanaya inaad hesho dhibcaha Wi-Fi ee kuugu dhow goobtaada, xitaa markii aadan ku xirnaan karin xog ahaan, xitaa inaad hesho shabakad. Sidan, haddii tusaale ahaan aad leedahay kaniini leh 3G sidoo kale waad u adeegsan kartaa si aad u hesho meel aad kugula xiriirto Wi-Fi ..
Isku Xirka Shabakadda Bilaashka ah ee Bilaashka ah
Codsigan wuxuu u muuqan karaa waxyar oo soo jiidasho leh mabda ‘ahaan marka loo eego kuwii hore. Maadaama aysan noo oggolaanayn inaan ku xirno shabakadaha leh eray sir ah, laakiin waxaa loogu talagalay inay fududeyso marin u helka shabakadaha furan.
Markaa, mahadsanid codsigan waxaan barnaamij u sameyn karnaa taleefankeena casriga ah, markasta oo aan ku dhaafno shabakad ka madaxbanaan furaha sirta ah, waxay si otomaatig ah isugu xiriirtaa iyada oo aan gacanta lagu qaban. Sidaa darteed, waxaan badbaadinaa inaad ka warhesho raadinta shabakad ama inkale.
Android, asal ahaan, waxay noo oggolaaneysaa inaan weydiinno taleefankeena gacanta si toos ah ugu xirno shabakad kasta oo aan horay u keydinay. Laakiin waxa aan uga mahadcelin karno barnaamijkan ayaa ah in aan muhiim noo aheyn in shabakadaha la keydiyo, maadaama kaliya aan ka gudubno ayaa ku filnaan doona.
Furaha sirta ah ee “WiFi password”
Waxa suuro gal ah waxa kugu dhacaya inay jiraan shabakad aad hore ugu wada xidhiidhay, laakiin markii dambe aad lumisay lambarka sirta ah isla markaana aadan fursad u helin inaad mar kale ku weydiiso. Thanks to WiFi WiFi waad soo ceshan kartaa eraygaas sirta ah si aad ugu xirnaato shabakada isla sidii aad horey u sameysay.
Dabcan, codsigan ayaa kaliya sameyn kara soo kabashada sirta ah qaar ka mid ah hawl wadeenada, marka waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad hesho. Haddii aad aragto in shabakadda aad u baahan tahay ay u muuqataa cagaar, markaa si fudud ayaad u heli kartaa erayga sirta ah. Waxay ku habboon tahay helitaanka furayaasha sirta ah oo aan laga helin barnaamijyadii hore.
Waa maxay sababta ay ugufiican tahay in lagu xiro Wi-Fi
Sababta ugu weyn ee loo isticmaalo shabakadda Wi-Fi waa sababta oo ah sicirka xogta Caadi ahaan waxay leeyihiin xadidan, oo laga yaabo inaadan rabin inaad kubixiso baahi aan loo baahnayn. Laakiin sidoo kale shabakadaha Wi-Fi, haddii aysan aad u buuq badanayn, aad ayey uga dhakhso badan yihiin.
Adiguna? Weligaa adeegsi ma u isticmaashay inaad ku xidho shabakadaha Wi-Fi bilaashka ah? Dadweynaha mise mid gaar ah? Waxaan kugu casuumeyneynaa inaad ka gudubto qeybta faallooyinka oo noo sheegto fikradaha aad ka qabtid barnaamijyadan noocan ah.